DHAGEYSO:Sirdoonka Itoobiya Iyo Dhiibistii Qalbi Dhagax Galka Baarista !
Wednesday August 15, 2018 - 20:55:05 in Wararka by Mogadishu Times
Toddobaadka dambe waxay ku buuxdaa sannad markii dawladda Soomaaliya ay dawladda Itoobiya u gacan gelisay sarkaalka ururka ONLF ee Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax. Dhiibistaasi waxay dawladda u abuurtay qalalaasihii siyaasadeed ee ugu weynaa sannadkaa
Toddobaadka dambe waxay ku buuxdaa sannad markii dawladda Soomaaliya ay dawladda Itoobiya u gacan gelisay sarkaalka ururka ONLF ee Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax. Dhiibistaasi waxay dawladda u abuurtay qalalaasihii siyaasadeed ee ugu weynaa sannadkaas tan iyo markii ay xukunka qabatay.
Hase yeeshee sida ay ogaatay idaacadda VOA Cabdikariim Qalbi Dhagax waxa kale oo uu ka mid ahaa saraakiil ka tirsan ONLF ah oo bartilmaameed u ahaa shirqool khaarajin ah, sida ay muujinayaan diiwaannada maxkamadaha Soomaaliya. Waa kan Haaruun Macruuf iyo Barnaamijkii Galka Baarista. Xigasho VOA